Yakasungwa bhachi, Puffer Mabhachi, Mbeu dzakauchikwa bhachi - Senkai
Vakadzi vasina mvura vakadzi padding rekunze bhachi 9220306
Tsananguro: Vakadzi vane hooded anodhinda padding yekunze bhachi haina mvura uye haina mhepo. Kuramba rakaomarara goko uye rakazara rakapetwa musono rinokudzivirira kubva mukudonha uye kuzadza. Yakakora 100% polyester yakasungirirwa vakadzi padding yekunze jekete inokuchengetedza iwe kudziya. Chinogadziriswa hood uye cuffs inokwenenzverwa inogona kubatsira kuchengetedza mhepo kubuda uye kubata zvakashata mamiriro ekunze emamiriro ekunze, senge mvura, makore kana gore rechando. Mahomwe maviri emaoko anokodzera hupenyu hwezuva nezuva .Zvakanakira zvezuva nezuva kupfeka, senge kutsetseka, chando ...
Yevakadzi yemukati isina mvura bhachi 9220314
Tsananguro: Yevakadzi yemukati mekunze isina mvura bhachi inodziya uye haina mhepo. Kuramba rakaomarara goko uye rakazara rakapetwa musono rinokudzivirira kubva mukudonha uye kuzadza. Yakakora 100% polyester yakasungirirwa vakadzi padding yekunze jekete inokuchengetedza iwe kudziya. Chinogadziriswa hood uye cuffs inokwenenzverwa inogona kubatsira kuchengetedza mhepo kubuda uye kubata zvakashata mamiriro ekunze emamiriro ekunze, senge mvura, makore kana gore rechando. Mahomwe maviri emaoko nehomwe yechipfuva imwechete zviri nyore kune hupenyu hwezuva nezuva .Zvakanakira kupfeka kwemazuva ese, senge kutsvedza, chando ...
Yevakadzi juzi bvudzi rakasanganiswa bhachi 17930
Yevakadzi yakasarudzika juzi juzi jasi inogadzirwa kubva ku100% polyester dehwe rine juzi-rakasungwa kumeso uye 100% nylon, yakawanda-isina nyaradzo.Flat-seam kuvaka inoderedza yakawanda uye inobatsira kubvisa kutsva. Kugadziridza hood kunobatsira kudzivirira mhepo kubuda. Kuuya muHeather Dombo kana Heather Obsidian, aya matoni akanyarara anoshanda nechero fashoni pairing iwe yaunogona kufunga nezvayo. Zvipfeke kana kugara zvakasarudzika, chidimbu ichi chakaringana mune chero mamiriro uye nharaunda. Tsananguro ...
Evanhu padded bhachi musono Zipper pocke ...
Iyi yeVarume Vakapetwa bhachi ndizvo chaizvo zvaunoda kune inotonhora nguva yechando. Hukuru hwekudzivirira kugona, kunyangwe mune nyoro mamiriro. Super-inodziya uye isingaremi microfiber padding inosanganiswa nemvura inodzora jira rekunze - rakanakira kupfeka kwemazuva ese. Iyo jekete inodziya ine dzakapfava dzakasungwa mabhandi pane hood uye cuffs zvinodzivirira mhepo kubuda. Iri jasi revarume rakarongedzwa uye rakagadzirwa kuti riwane kugadzikana kwakaringana uye kwakaringana mashandiro, zvichikubvumidza iwe kuti uite yako yakanaka kwazvo uchinakidzwa nekunze kwekunze ...
yevakadzi padding yekunze bhachi 8218394 wa ...
Vakadzi vekunze vakapfeka bhachi vanokuchengetedza iwe inodziya. Kugadziridza dutu hood uye yakasungwa rakamonerwa-rakabatanidzwa cuffs zvinobatsira kuchengetedza mhepo kubuda.New design inoita kuti jasi rive remhando yepamusoro uye rinotaridzika rinotaridzika.Rakanakira zviitiko zvekunze. Zvimiro: 1. Mucheka: jira reganda: nyanzvi yemvura inodzora yakaputirwa, jira rembatya: 100% polyester / dehwe. 2.Waterproof & isina mhepo: Yakakwira-tech polyester machira anochengetedza muviri wako kuoma uye kudziya ...
yevakadzi isina mvura bhachi 9220501-2-6
Vakadzi vanodzivirira mhepo jekete vanodzivirira mhepo kubuda. Isina mvura goko bhachi rinokuchengetedza iwe kuoma uye kugadzikana kubva kunaya uye sinou .Inosvikika dutu hood netambo uye inogadzikika cuffs inowedzera kudziya .High yepamusoro kuzadza kukuchengetedza iwe uchidziya .Ichi chakanakira zvemukati nekunze zviitiko. Zvimiro: 1. Mucheka: jira reganda: nyanzvi yemvura inodzora yakaputirwa, jira rembatya: 100% polyester / dehwe. 2. Isina mvura: bhachi rechikadzi rechando rakagadzirwa neshinda isina mweya yekufema, uye ese zipi ari ...
Yevakadzi faux fur coat WARMY
Vakadzi vane hooded fur coat inogadzirwa nemhando yepamusoro Faux Fur. Iyo jekete jira Ramba uchidziya uye ugare uri chimiro chako chakasimba kunyangwe mune yakaipa mamiriro ekunze mune iri jasi repamusoro. Iyo inochengetedza zvakatipoteredza uye yakasikwa.Hood uye Elastic makutu anogona kudzivirira mhepo kubuda.Iye jasi idhizaini inonzwa nyore kupfeka. Icho chisina kujairika uye zvakare chinoonekwa zviri pamutemo nekupfeka, icho chinhu chine akasiyana siyana ekugadzirisa. Yakakwana mechi neyako yaunofarira zvikabudura, leggings, nhema nhema, madhimoni majean, etc. Specificatio ...
Yevakadzi isina mvura chando bhachi NL0039KI-F
Yevakadzi padding ski bhachi haina mvura uye haina mhepo. Unyanzvi hwemvura inodzora yakaputirwa, kubhururuka kwemvura uye jira rakasimba kunovimbisa yakanyanya kupisa kuchengetedza, Inorwa kunaya kana kunaya mamiriro ekunze. Chinobviswa chinogadziriswa hood chinobatsira kuchengetedza mhepo uye kugara wakasununguka. Relaxed-fit chimiro pamwe nekukurumidza-yakaoma zvinhu. Dhinda logo inoratidza mucherechedzo pachipfuva chekuruboshwe. Iyo inoshandiswa kudzika Skiing, Snowboarding, Snowsports uye mimwe mitambo yechando yekunze. Tsananguro ...
Ngatitorei budiriro yedu kune yepamusoro nhanho
Isu tapedza uye takapasa gore rino BSCI fekitori odhita. Isu tese tinoziva kuti BSCI certification inobatsira fekitori: 1. Zadzisa zvinodiwa zvevaenzi. 2. Chimwe chitupa che diff ...
1. Iyo cationic jira ine yakanaka kwazvo yekumwa mvura uye iyo yekudhaya tangi mutsauko idiki diki, saka inonyanya kukodzera yemitambo mbatya, kunyanya inogadzirwa kuita sweatshirts, sweatpants, ...
Nekuvandudza kwevanhu kuziva kwekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye nekusimudzira tekinoroji, machira akadzokororwa akapinda muhupenyu hwedu. Boka redu vava kushandisa zvishandiswezve micheka T ...
Skiing bhachi, Ski bhachi, Yakasungwa Ski bhachi, Vana Ski bhachi, 80s Ski bhachi, Ganda Rejacket,